Ndị mmekọ Finnair na Juneyao Air na ụzọ Helsinki-Shanghai na gafere
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Ndị mmekọ Finnair na Juneyao Air na ụzọ Helsinki-Shanghai na gafere
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Finland na -agbasa ozi ọma • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ahịa Finnair ga-erite uru site na njikọta dị mma na netwọkụ nke ebe 57 dị na China site na Juneyao's Shanghai Pudong hub, na ndị ahịa Juneyao ga-ekpori ndụ nke ọma na netwọkụ zuru oke nke Finnair nke ebe 65 Europe site na Helsinki hub.
Finnair na Juneyao Air na-abanye na mmekorita azụmahịa na nkwonkwo.
Ndị ọrụ abụọ ahụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ na ụgbọ elu dị n'etiti Helsinki na Shanghai.
Finnair na Juneyao Air na-arụ ọrụ ụgbọ elu 2 kwa izu n'etiti Helsinki na Shanghai ma ga-abawanye ugboro ugboro ozugbo ọnọdụ ọrịa na-enye ohere.
Finnair na Junehaio Air nke dị na Shanghai ga-abanye na njikọta azụmahịa na 1 July 2021, ebe ndị ọrụ abụọ ahụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ na ụgbọ elu n'etiti Helsinki na Shanghai yana isi ihe karịrị China na Europe.
Finnair na Juneyao Air bidoro imekọ ihe ọnụ na July 2019, mgbe Juneyao Ikuku malitere ụzọ Shanghai-Helsinki. Azụmaahịa a jikọtara ọnụ na-eme ka mmekọrịta ahụ sie ike, na-enye ndị ahịa ụlọ ọrụ na ndị ahịa ohere ịmegharị nhọrọ ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe, ụgwọ ndị mara mma na uru bara uru maka ndị otu flyer ugboro ugboro. Ndị ahịa Finnair na Juneyao ga-erite uru site na iwu ndị ahịa na-agbanwe agbanwe dịka ọmụmaatụ na nkwụnye ụgwọ ibu, nlekọta ndị ahịa jikọtara ọnụ na mmelite akara ngosi mgbe niile na ụgbọ elu abụọ ahụ.
Ndị ahịa Finnair ga-erite uru site na njikọta dị mma na netwọkụ nke ebe 57 dị na China site na Juneyao's Shanghai Pudong hub, na ndị ahịa Juneyao ga-enwe nnweta nke ọma na netwọkụ Finnair buru ibu nke ebe 65 Europe gafere site na Helsinki hub.
Finnair na Juneyao Air na-arụ ọrụ ụgbọ elu 2 kwa izu n'etiti Helsinki na Shanghai ma lelee anya ịba ụba ugboro ugboro ozugbo ọnọdụ ọrịa ahụ kwere. Na 2019, Finnair na Juneyao Air na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'etiti Helsinki na Shanghai.
"Finnair bụ maka ịnye njikọ kacha mma n'etiti Europe na Eshia", ka Topi Manner, Onye isi ọrụ na Finnair na-ekwu. “Nke a bụ ezigbo mmeri mmeri, nke ga - enyere ndị Finnair na ndị ahịa Juneyao aka ị nweta nnweta nnabata na ntanetị njikọ anyị. Ọ bụkwa ihe akaebe nye mkpebi siri ike Finnair na China dị ka ahịa ahịa. Anyị na-ele anya iso ndị enyi anyị na-arụkọ ọrụ nke ọma na Juneyao, iji wee wuo ọdọ mmiri siri ike n'etiti China na Europe site na ụlọ ọrụ Shanghai na Helsinki.
“Anyị na-asọpụrụ ịhazi mmekọrịta mmekọrịta a na Finnair iji nye ndị ahịa anyị ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ dị mma, nye nhọrọ nhọrọ ụgbọ elu na-agbanwe karị, na ahụmịhe njem na-enweghị ntụpọ. Lọ ọrụ njikọta na Finnair ga-ekwe ka Juneyao Air kwalitekwu ahịa ya na Europe, nke bụ atụmatụ dị mkpa na mgbasawanye ụwa anyị ebe ọ na-eme ka ọnụnọ Juneyao Air dị na ahịa ụgbọ elu edobere ka ọ bụrụ 'onye bara nnukwu uru' ”. Zhao Hongliang, onye isi ndị isi na Juneyao Air.
Juneyao Air bidoro ụzọ ya site na Shanghai ruo Helsinki na July 2019, kemgbe ahụ Finnair na Juneyao nọ na-edebanye aha na ọrụ Helsinki-Shanghai na ibe ha na ụgbọ elu njikọta sitere Helsinki ruo Europe yana site na Shanghai gaa ebe ndị ọzọ na China. Emebere nkwekọrịta maka Finnair Plus na Juneyao Air Club ugboro ugboro ndị ọrụ flyer na August 2019, na-enye ndị ahịa ohere ị nweta ma gbapụta kilomita na isi n'akụkụ netwọkụ ọ bụla.
Ndị otu egwuregwu bọọlụ Subaru na MLS nabatara ụbọchị nkịta ọhụrụ…
Mpaghara Ntụrụndụ Toronto nabatara ọhụrụ ...
Ememe okike Maison Décotterd bụ ...
Coral Vita nke sitere na Bahamas meriri Onye isi dị ebube ...
US na-emepe: ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke yana COVID-19 na-adịghị mma…